Zavaboary vaovao, Fiangonana Eran-tany Manerantany Switzerland (WKG)
Voam-bary, tongolobe, atody, karazan-tany. Ireo zavatra ireo dia manaitra saina be, sa tsy izany? Rehefa nanao fantsom-boankazo aho tamin'ity lohataona ity, dia tsy niheritreritra ahy intsony. Ahoana no nahavitan'ireo bolam-borona ratsy tarehy sy volontsôkaly ary fatratra ireo voninkazo mahafinaritra eo amin'ny marika fonosana?
Eny, rehefa nisy fotoana kely, rano kely sy masoandro kely, nanjary gaga ny tsy fahatokisan-tena ka nahatonga ny fikosoham-bary maintso avy amin'ny tany aloha. Avy eo dia niseho ny kakazo. Avy eo nisokatra ireo voninkazo mavokely sy fotsy ireo, voninkazo 15 cm. Ka tsy misy dokambarotra sandoka! Fahagagana izany!
Indray dia hita taratra eo amin'ny ara-batana ny ara-panahy. Andao hijery. Andao hojerentsika ny fitaratra. Ahoana no ahafahan'ireto olona misaina ara-nofo, feno fitiavan-tena, tsy misy dikany, ny fitsiriritana, ny fanompoana sampy (sns), ho tonga masina sy tonga lafatra, araka ny nambara mialoha ao amin'ny 1 Petera 1,15:5,48 sy Matio? Tafiditra ao ny sary an-tsaina be dia be, izay tsara ho antsika fa be dia be Andriamanitra.
Toy ny tongolobe na ny masomboly tamin ’ny tany ihany isika. Toa maty izy ireo. Toa tsy nisy fiainana tao aminy. Talohan'ny naha-Kristiana antsika dia maty teo amin'ny fahotantsika isika. Tsy nanana fiainana izahay. Ary avy eo nisy zavatra mahagaga. Rehefa nanomboka nino an'i Jesosy dia lasa zavaboary vaovao isika. Ny hery izay natsangan'i Kristy tamin'ny maty no nanangana antsika tamin'ny maty koa.
Nomena fiainana vaovao isika araka ny voalaza ao amin'ny 2 Korintiana 5,17:1997: "Koa raha an'i Kristy ny olona dia efa 'zavaboary vaovao' izy. Ny zavatra nampiasainy taloha dia vita; misy zava-baovao (fiainam-baovao) nanomboka! ”(Rev.GN)
Ao amin'ny lahatsoratro momba ny maha-izy antsika an'i Kristy dia nametraka "voafidy" teo am-pototry ny hazo fijaliana. "Ny famoronana vaovao" izao dia mihazona ny vatan-dàlana mijoro. Tian'Andriamanitra ho isan'ireo ankohonany isika; izany no mahatonga antsika hanao zavaboary vaovao amin'ny alàlan'ny herin'ny Fanahy Masina.
Tahaka ny tsy itovizan'ireo bolongana ireo ihany no namboleko taloha, dia toy izany koa isika mino fa tsy mitovy amin'ny olona taloha intsony. Vaovao. Tsy mieritreritra toa ny teo aloha intsony isika, tsy manao zavatra intsony ary tsy hitondrana ny hafa toy ny fanaontsika taloha. Fahasamihafana tena lehibe iray: tsy mieritreritra an’i Kristy intsony isika toy ny mahazatra antsika. GN-1997 dia nanonona ny 2 Korintiana 5,16 toy izao manaraka izao: "Ary izao ka hatramin'izao dia tsy hitsara intsony aho araka ny fenitry ny zanak'olombelona [marina], fa tsy Kristy, izay nofidiko hatrizay. hafa noho ny taloha]. "
Efa nomena fomba fijery vaovao momba an'i Jesosy isika. Tsy mahita azy intsony isika amin'ny fomba fijery tsy eto an-tany, tsy mampino. Tsy mpampianatra be fotsiny izy. Tsy olona tsara miaina miaina tsara fotsiny izy. Tsy haingana izy nametraka basy tamin'izao tontolo izao ..
Izy dia Tompo sy Mpanavotra, zanak'ilay Andriamanitra velona. Izy no maty ho antsika. Izy no nanolotra ny fiainany hanome antsika ny ainy. Izy no nanao antsika vaovao.